छोरी अष्ट्रेलिया पठाउन भाइसँगै विवाह ! – Sandesh Press
November 20, 2021 150
काठमाडौँ– नेपालमा हाडनाता सम्बन्धमा विवाह चल्दैन । कानूनअनुसार यदी विवाह भयो भने पनि स्वतः बदर हुन्छ ।
तर अवसर र फाइदाका लागि मानिसहरु कुन हदसम्म गिर्छन् भन्ने हालै सार्वजनि एउटा समाचारले पुष्टि गरेको छ । हालै एक परिवारले छोरीलाई अष्ट्रेलिया पठाउन भाइसँगै विवाह गरिदिएका छन् ।
घटना भारतको हो । भारतको पन्जाबमा एउटै दिदीभाइले अष्ट्रेलिया जाने लोभमा विवाह गरेका हुन्। भाइ अष्ट्रेलिया कार्यरत भएको र बहिनीलाई अष्ट्रेलिया सिफ्ट हुनुपरेकोले उनले आफ्नै भाइसँग विवाह गरेकी हुन् ।
विवाह लगत्तै बहिनीले नक्कली पासपोर्ट बनाएर अष्ट्रेलिया गएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन । भाइ-बहिनीको विवाह गराउन उनीहरूका आफन्त पनि लागिपरेको जनाइएको छ ।ढल्कुमा घर भत्किँदा चार वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका– १७ मा अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त घर भत्किँदा बालक मृत्यु भएक हो । उनलाई प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाएको पनि अस्पतालमा निधन भएको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घरमा कोही पनि नभएका अवस्थामा केही समयअघि घर भ’त्किएको र बालक भा’ग्न ला’ग्दा घरले च्या’पेर गम्भीर घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ । उक्त घटनाका कारण बालकको मृत्यु भएको हो । अन्य क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
त्यस्तै बागलुङको बुर्तिबाङमा ग२च ५९८० नम्बरको पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ । तमानखोला गाउँपालिका–२ का ८ वर्षीय जोन सिर्पालीको मृत्यु भएको हो ।
प्रहरी निरीक्षक जयराम वन्तका अनुसार दुर्घटनामा ढोरपाटन–१ का ५८ वर्षीय नरकितव सुनार, ढोरपाटन–६ का ३० वर्षीय विष्णुप्रसाद सापकोटा, ढोरपाटन–५ का ४७ वर्षीया सक्रेनी घर्ती, ढोरपाटन–५ कै ५० वर्षीया नरमला घर्ती, ढोरपाटन–१ का ४८ वर्षीय लेविन्द्र कुँवर र ढोरपाटन–७ का ९ का आकाश घर्ती घाइते भएका छन् । घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको घट्नाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevकेहीबेर अघि काठमाडौंमा घटेको यो अत्यत दुखदायी घ’टना
Next३० वर्षीया जागिरे कन्यालाई इमान्दार वर चाहियो–सम्पर्क नम्बर ९८५५०५७
चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई दोब्बर तलब, कस्को भत्ता कति (विवरणसहित )
चुनावको मुखमै बहालवाल मन्त्री आले र प्रचण्ड पुत्रीको यस्तो काण्ड बाहिरियो, अरु को-को मुछिए ?
तनुहु कारागारबाँट पल शाहको भिडियो सन्देश : सत्यको जित हुन्छ ढिला चाडो